Iyo Phoenix yezvigayo, yekusingaperi Lope de Vega. 5 sonnets | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Chechi yeSan Sebastián, Madrid. @Mariola Díaz-Cano Arevalo
Yaiva muMadrid, guta rakaona kuzvarwa uye zvakare kufa pazuva rakafanana nanhasi 1635 to Lope de Vega Carpio, mudetembi wechiSpanish uye munyori wemitambo, chimwe chezvakakosha zveGolden Age yedu uye pamwe yedzese nhetembo dzenyika nemitambo. Uye vese veMadrid vakaenda kunomuona musi iwoyo. Saka kurangarira ndinosarudza izvi 5 sonnets. Kunyangwe paine chikonzero chekuverenga Lope: ukuru.
4 Kune dehenya
5 Kuda kuva mukati mako
6 Kubvarura simba
7 Ndinofa nerudo
Tese takaverenga kana "kuona" Lope, iyo Fénix de los ingenios kana Monster yeMasikirwo, saiye akararama panguva yake akamudana chimwe Miguel de Cervantes, waakaramba achikwikwidzana naye. Ndima yake, yemitambo yake ... Tese takadzidza kuti sonnet yaive nei Sonnet inondiudza kuti ndiite Violante. Uye isu tese tinoziva kwazviri Fountainovejuna uye kuti imbwa yemurimi inoshandisa sei.
Akazvarwa muMadrid mugore 1562 uye aive mwanakomana wevaviri vanozvininipisa varombo. Haana kupedza chikoro chesekondari, asi kunyangwe zvakadaro, aive munyori yakawanda kwazvo iyo yairima mhando dzakasiyana, senge rondedzero, yemitambo uye zvakare rwiyo. Kubva hwakanyanya rudo hupenyu, anga ane vana gumi nevashanu pakati pevamutemo nevasiri pamutemo. Uye aive shamwari Francisco de Quevedo kana Juan Ruiz de Alarcón. Dambudziko riripo, pamwe nekuda kwekurasikirwa nehama dzinoverengeka, rakamuendesa kuupristi.
Basa rake rakafurirwa Luis de Gongora, watinoziva tese kwazvo kuti aive neruvengo. Asi toni yaLope iri padyo ne mutauro wakawandisa. Nekudaro, iko iko kunyorwa kwayo uye kwayo kuvandudza hunhu iri mumitambo yake. Aida kuburitsa nyaya dzaive ichokwadi uye kupi, semuhupenyu, mutambo uye komedhi kusangana.
Kusimbisa pakati pemamwe emabasa ake: Fountainovejuna, Peribáñez uye Mutungamiriri weOcaña, Meya akanakisa, mambo, Nyeredzi yeSeville, Mukadzi akapusa, Iyo simbi yeMadrid, Iye akangwara anoda, Chirango chisina kutsiva...
Zvisinei, nhasi ndinogara nemaverse ake uye ini ndinosarudza aya maoneti mashanu (e5 3 ayo anonzi akanangana naye) ayo anoratidza kudetemba kwake kwekudanana uye kwechitendero zvakare.
kupenga, kufungidzira, chimerist,
kuti iwe uratidze iye anokunda zvakanaka zvake mauri,
makomo akati sandara nemakungwa akaoma;
makanika, muzivi, alchemist,
chakavanzika chakavanzika, lynx asingaoni,
kuvhundutsa maungira ako;
mumvuri, kutya, zvakashata zvakakonzerwa newe,
ane hanya, mudetembi, anorwara, anotonhora,
maoko eushingi netsoka dzemupoteri.
Murege atarise kana kurara, hafu yeupenyu ndeyako;
kana ndikazviona, ndichakubhadhara nezuva racho,
uye kana ndikarara, handinzwe zvandiri kurarama.
Uyu musoro, uchiri mupenyu, waive nawo
pamavakirwo emapfupa aya
nyama nebvudzi, avo vakasungwa
maziso akamutarisa akamira.
Pano pakasimuka muromo,
atooma nekutsvoda kwakadaro kwechando,
pano maziso akanyorwa emerald,
Ruvara rwakashongedzwa nemweya mizhinji.
Heino fungidziro yandaive nayo
kutanga kwekufamba kwese,
pano yemasimba iko kuwirirana.
Oo runako runofa, kite mumhepo!
Akagara kupi zvakanyanya kuzvitutumadza?
Makonye anozvidza kamuri here?
Kuda kuva mukati mako
Uchida kuva mukati mako,
Lucinda, kuti uone kana ndichidiwa,
Ndakatarisa kumeso kuya kwave kubva kudenga
ine nyeredzi uye yakasikwa zuva kopi;
uye nekuziva kusagadzikana kwayo,
Ndakazviona ndakapfeka muchiedza nekubwinya,
muzuva rako sePeton yakarasika,
paakapisa minda yeEtiopia,
Ndoda kufa ndakati: «Tive,
kupenga zvishuwo, nekuti wanga uri wakawanda,
mabasa acho haana kuenzana. '
Asi chaive chirango, chekuwedzera kutya,
zviviri zvinopesana, kufa kuviri, zvishuwo zviviri,
Zvakanaka, ndinofira mumoto uye ndanyungudika nemisodzi.
Mune mweya wekutaura newe mune chivimbo
nekunamata kwake ndakapinda mutembere rimwe zuva,
uko Kristu pamuchinjikwa akapenya
neruregerero rwevaya vanomutarisa, zvakwana.
Uye kunyangwe kutenda, rudo uye tariro
Vakaisa ushingi parurimi rwavo,
Ndakazviyeuchidza kuti yaive yangu mhosva
uye ndinoda kutsiva.
I was coming back ndisina chandakataura
uye kuti ndaona sei chironda padivi,
mweya wakamira nemisodzi yagezwa.
Ndakataura, ndikachema ndikapinda ndichibva kudivi iro,
nekuti Mwari haana musuwo wakavharwa
kune moyo unopwanyika uye wakaninipiswa.
Ndiri kufa nerudo, zvandanga ndisingazive,
kunyangwe aine hunyanzvi hwekuda zvinhu pasi,
kuti handina kufunga kuti rudo rwunobva kudenga
nehasha dzakadaro mweya yakabatidzwa.
Kana iwe ukadaidza huzivi hwehunhu
shuwa kubva parunako kuda, kusahadzika
kuti nekuzvidya mwoyo kukuru ndinomuka
kunaka kwangu kwakanyanya sei.
Ini ndaida munyika yakashata, sei benzi mudikani!
O mwenje wemweya, uchifanira kukutsvaga,
inguva yandakatambisa sekusaziva!
Asi ini ndinokuvimbisa iwe ikozvino kuti ndikubhadhare iwe
nezviuru mazana emakore erudo chero nguva
kuti nekundida ndakarega kukuda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Iyo Phoenix yezvigayo, yekusingaperi Lope de Vega. 5 sonnets
Mika Waltari naSinuhé muIjipita. Ongororo yebasa remunyori wechiFinnish.